Puntland oo ka dacwootay Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa ka hadlay qabsashadii ciidamada Somaliland ee degmada Taleex. Puntland ayaa sheegata in degmada Taleex ka mid ah maamulkeed, hase ahaatee waxaa arrinkaas diidan maamulka Somaliland oo xoog ku qabsaday.
Warsaxaafadeed kazoo baxay madaxtooyada maamulk Puntland ayaa oo looga hadlay weerarka Somaliland ee Taleex ayaa u qornaa sidan:-
1- Waxay Puntland la socod siineysaa beesha caalamka in maamulka Somaliland uu duulaan qaawan ku soo qaadey 10 June, 2014 degmooyinka Taleex iyo Xingalool oo ka tirsan dhulka Puntland.
2- Duulaankaas gardarada ah wuxuu sababay barakac baahsan oo ka socda deegaamadaas.
3- Puntland waxay mar kale u caddeynaysaa ummadda Soomaaliyed, dawladaha dariska ah iyo beesha caalamka in maamulka Somaliland mar kasta oo ay duulaan kusoo qaadaan dhulka Puntland ay weheliyaan howgalo ay ku taageerayaan ururka Al -shabaad ee argagixisada ah si ay uga fuliyaan gudaha Puntland falal argagiso
4- Ugu danbeyn Puntland waxay diyaar u tahay iyadoo fulineysa waajibaadka dastuuriga ah in ay difaacdo dhulkeeda iyo dadkeeda
5- Waxay kale oo ay Puntland u direysaa baaq nabadgalyo iyo in la joojiyo colaadaha ku soo noqnodey gobolka shabeelada hoose iyo kuwo ka soo cusboonaadey gobolka Galguduud in lagu dhameeyo colaadahaas wado hadal
Ergo nabadeed oo lagu weeraray Galgaduud